I-LSR & RUBBER MOLDING - I-Chapman Technology Co, Ltd.
Inqubo yethu yokubumba irabha eyakhiwe ngoketshezi ikhiqiza ama-prototypes wangokwezifiso nezingxenye zokukhiqiza ezisetshenziswa ekugcineni ezinsukwini eziyi-15 noma ngaphansi. Sisebenzisa isikhunta se-aluminium esinikela ngamathuluzi angabizi kakhulu nemijikelezo yokukhiqiza esheshayo, futhi sithengisa amamaki ahlukahlukene kanye nama-durometers wezinto ze-LSR.
Ingabe Liquid Silicone Rubber Molding Umsebenzi?
Ukubunjwa kwe-LSR kwehluka kancane ekubunjweni komjovo we-thermoplastic ngenxa yokuguquguquka kwayo. Njengethuluzi elijwayelekile le-aluminium, ithuluzi lokubumba le-LSR lenziwe kusetshenziswa imishini ye-CNC ukwakha ithuluzi lokushisa eliphakeme elakhelwe ukumelana nenqubo yokubumba ye-LSR. Ngemuva kokugaya, ithuluzi lipholishiwe ngesandla ekucacisweni kwamakhasimende, okuvumela izinketho eziyisithupha ezijwayelekile zokuqeda ubuso.
Ukusuka lapho, ithuluzi eliqediwe lilayishwa kumshini wokujola oqondile we-LSR oqonde ngqo owenzelwe ukulawula okunembile kosayizi wokudubula ukukhiqiza izingxenye ze-LSR ezingaguquguquki. E-Protolabs, izingxenye ze-LSR zisuswa ngesandla ekubunjweni, njengoba izikhonkwane ze-injector zingathinta ikhwalithi yengxenye.
Izinto ze-LSR zifaka ama-silicone ajwayelekile namamaki athile ukulingana izicelo ezahlukahlukene zezingxenye nezimboni ezinjengezokwelapha, ezezimoto, nokukhanyisa. Njengoba i-LSR iyi-polymer ye-thermosetting, isimo sayo esibunjiwe sinomphela — uma sesisethiwe, ngeke siphinde sincibilike njenge-thermoplastic. Lapho ukugijima sekuqedile, izingxenye (noma isampula yokuqala run) zifakwa ebhokisini bese zithunyelwa kungekudala ngemuva kwalokho.